Njengoba yenziwe Isibonakhulu Amaslayidi
Glass lelungiselelwe Isibonakhulu Amaslayidi
Plastic lelungiselelwe Isibonakhulu Amaslayidi
Isayensi lelungiselelwe Isibonakhulu Amaslayidi
Botany Slide Elungisiwe
Zoology lelungiselelwe Amaslayidi
Histology lelungiselelwe Amaslayidi
Anatomy lelungiselelwe Amaslayidi
Pathology lelungiselelwe Amaslayidi
Parasitology lelungiselelwe Amaslayidi
Amaslayidi Ufuzo lelungiselelwe
Microbiology lelungiselelwe Amaslayidi
Plant Isibonakhulu Amaslayidi
Animal Isibonakhulu Amaslayidi
Cell Isibonakhulu Amaslayidi
nezilwanyana ezincane Eukaryotic ifa ulwelwesi-bound cell organelles futhi zihlanganisa isikhunta protists, kuyilapho izinto eziphilayo-konke prokaryotic okuyizinto ezibalulekile nezilwanyana ezincane-kuthiwa evamile labizwa ngokuthi entula organelles ulwelwesi-beboshiwe futhi zihlanganisa eubacteria futhi archaebacteria. Microbiologists ngokwesiko wancika isiko, staining, futhi microscopy. Nokho, ngaphansi kuka-1% izilokazane ezincane samanje ezindaweni ezivame kungaba cultured todvwa usebenzisa izindlela zamanje.  Microbiologists ngokuvamile ancike yamangqamuzana amathuluzi biology ezifana ukuhlonza DNA ukulandelana based, isibonelo 16s rRNA isakhi sofuzo ukulandelana esetshenziselwa amagciwane ukuhlonza.
Microbiology isifundo sazo zonke izinto eziphilayo ezincane kakhulu ukuze sibonakale ngeso lenyama. Lokhu kuhlanganisa ama-bacterium, archaea, amagciwane, isikhunta, prions, lenyama kanye ulwelwe, bebonke eyaziwa ngokuthi 'amagciwane. Lezi amagciwane ukudlala izindima eziyinhloko ngebhayisikili izakhi, biodegradation / biodeterioration, ukuguquka kwesimo sezulu, ukudla spoilage, imbangela nokulawula isifo, kanye biotechnology. Ngenxa yizinhlobonhlobo zabo, amagciwane zingabekwa ukusebenza ngezindlela eziningi: okwenza esindisa ukuphila, womshini ngezitshalo, bebutha zokungcoliswa kwawo, futhi esikhiqiza / ukucutshungulwa ukudla nokuphuza.
Microbiologists ukufunda amagciwane, futhi ezinye yezinto ezibaluleke kakhulu eziye isekelwa zomphakathi wanamuhla ziye zabangelwa ucwaningo of microbiologists abadumile, ezifana Jenner imithi yokugomela yakhe ngokumelene ingxibongo, uFleming nabanye kokutholakala-penicillin, Marshall futhi ukuhlonza isixhumanisi phakathi Helicobacter pylori ukutheleleka kanye nezilonda esiswini, futhi zuri Hausen, ngubani ezikhonjwe isixhumanisi phakathi papilloma virus futhi umdlavuza wesibeletho.
ucwaningo Microbiology bekulokhu, futhi iyaqhubeka iba, emaphakathi nokuhlangabezana eziningi nezifiso global wamanje kanye nezinselelo, ezifana nokugcina ukudla, amanzi kanye nezizinda ezamandla, inabantu abanempilo kwi hlaba habitable. ucwaningo Microbiology izosiza ukuphendula imibuzo enkulu ezifana 'ahlukahlukene ukuthi ungukuphila Emhlabeni?', futhi 'Kusho ukuphila khona kwenye indawo e-Universe'?
isikhathi Iposi: Dec-04-2018
ku media zethu social
Empambana Xiangyang komgwaqo futhi Dongming eya eningizimu 300m, Hongqi wesifunda, Xinxiang, Henan
Microscope Inhloso Ulwazi Of The Mai ...
Telecentric Lens Ukwahlukanisa
Umbukiso Production Izindlela